Iràka : Fijoroana Vavolombelona Vitsy Mombanà Fanamparam-pahefana Ataon’Ireo Tafika Irakiana Misahana Ny Fiarovana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 2:58 GMT
Nilaza ny ONU fa efa “tsy voafehy” intsony ary “ratsy noho ny tamin'ny andron'i Saddam Hussein” ny fampijaliana ao Iràka. Koa dia ara-potoana tokoa ny fahatongavan'ny imailaka avy amin'i Brian Conley avy ao amin'ny Alive In Baghdad nilaza fa nitafa taminà lehilahy iray voadaroka sy nohararaotin'ireo Tafika Irakiana Misahana Ny Fiarovana tao Ramadi izy :
Tsindrio eo amin'ny sary hampandeha ilay lahatsary
Ny 13 Jolay 2006, nosamborin'ireo avy ao amin'ny Mpiambina nasionaly Irakiana na ny “Iraqi National Guard” – izay antsoina indray moa ankehitriny hoe New Iraqi Army na ny Tafika Irakiana Vaovao – ilay lehilahy ao anaty lahatsary, antsoina hoe “Majed”, kanefa tsisy heloka nataony akory araky ny voalazany. Anatin'ny fanararaotana lazainy ny fitanàna an-keriny, ny daroka sy ny daka miverimberina, ary ny fandorana amin'ny herinaratra. Nasehony an-tsary ireo holatra ara-batana nahazo azy tamin'izany.
Misy fanontaniana vitsivitsy momba ity raharaha ity izay tsy voavalin'ilay tafa an-dahatsary: Nametraka fitarainana tamin'ny manampahefana ofisialy ve i Majed ? Raha nametraka fitarainana izy, nandà ny fiampangàna ve ny Tafika Irakiana misahana ny fiarovana sa nanaiky hanadihady azy ireo ? Raha marina ireo fanambarana ireo, ary raha fantatra ireo nahavita ny heloka, misy fanantenana ny amin'ny mety hahavoasazy azy ireo ve? Ary ahoana ny amin'ilay miaramila AMERIKANA voalazan'i Majed ?
Na izany aza, tokony ho ampy hisainantsika sy hakàntsika lesona ihany ireo fampijaliana nosoritsoritina tao anatin'ilay fanadihadiana..
Mampiseho ny tsy fahazoana antoka sy ny tsy fandriampahaleman'ny fiainana ao Iraka iny fijoroana vavolombelon'i Majed iny, indrindra ny ao Ramadi, izay ora iray mankany andrefan'i Baghdad ary voalaza ho isan'ny tanàna miaritra hery setra indrindra ao Iraka taorian'i Saddam. Voalazan'i Brian Conley tamin'ny volana jona fa lasa faritra tsy azo aleha ny ampahany betsaka any Ramadi. Tamin'ny faramparan'io volana io, nampihatra tetika vaovao ny tafika amerikana hifehezana ny tanàna. Araka ny voalazan'i Majed, nalain'ireo miaramila Irakiana izy, roa herinandro taorian'ilay heverina ho toy ny “fanadiovana” ho fiarovana.
Anatin'ireo filazam-baovao mpiseho isan-andro mikasika ny toedraharahan'ny fandriampahaleemana any amin-dry zareo, tsy misy zavatra tsotra tahaka ny hita maso ho an'ireo mponina ao Iraka. Tany am-piandohan'ity taona ity, nosoratan'i Riverbend ny momba ny fanambaran'ilay Minisitry ny Fiarovana Irakiana tamin'ny televiziona Irakiana nangataka “ny Olon-tsotra tsy hanaraka ny baikon'ny miaramila na polisy amin'ireo fisafoana isaky ny alina raha tsy hoe arahan'ireo Hery mivondrona miasa any amin'io toerana io ry zareo”. Kanefa nohazavain'i Majed fa raha ny zavatra niainany, toa vao mainka baiko “nampanohy” ireo Miaramila Irakiana handaroka azy ny fisianà manampahefana AMERIKANA nanatrika teo. Any amin'ny toerana sasantsasany, misy ireo fitarainana hoe tokony hodiovina tsy hisy ao anatiny ireo milisy tafiditra ao anatin'ny tafika. Miankina amin'ny tanàna sy ny faritra ao amin'ny firenena, indraindray ny polisy Irakiana sy ny Tafika Misahana Ny Fiarovana no hita ho mampiasa hery tafahoatra ny fandraisana andraikitra tokony hataony.
Ny fananganana ny fahafahamanaon'ny tafika Irakiana sy ny polisy no lazaina fa laharam-pahamehan'ny Tafika Iraisampirenena. Noho izany, miaraka amin'ny fifindrana tsikelikely mankany amin'ny andraikitra ho an'ny filaminana eo an-toerana sy any amin'ny faritra manerana ny firenena, hatraiza ny fahazoana antoka ireo Tafika Irakiana Misahana Ny Fiarovana ? Ny tatitra nataon'ny ONU no nilaza fa :
“Ny tsy fahavitan'ny andrim-panjakana mitondra ireo mpanitsakitsaka zon'olombelona ho eo anatrehan'ny fitsarana ary manome ny fiarovana sahaza azy ho an'ny olon-tsotra […] no atahorana mety hitondra ny fiarahamonina Irakiana ho amin'ny ambaratonga tsy mbola nisy toa azy sy hiteraka fifandonan'ny samy foko.”
Ary rehefa mitranga ny fifandonana, lasa tafiditra anatinà sary feno fijaliana be sy fahafatesana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona toy ireo voalazan'i Majed. Ny tomban'ny Iraky ny Firenena Mikambana ao Iraka no nanambara fa maherin'ny 6 500 ireo sivily maty tamin-kerisetra ny volana Jolay sy Aogositra teo an-tanan'ny Tafika, milisy, fanafihan'ny mpampihorohoro na fikambanan-jiolahy. Ireo vatana mangatsika ao amin'ny tranompaty zara fa izy ao Baghdad moa dia ahazoana maka sary an-tsaina ny haben'ny habibiana mahatsiravina misy, satria
“Matetika misy famantarana fampijaliana mafy anisan'izany ireo ratra azo avy amin'ny asidra na may vokatry ny akora simika, hoditra miendaka, taolana tapaka — lamosina, tanana sy ny tongotra — maso paoka, nify miala sy ratra maro vokatry ny milina fandavahana mandeha amin'ny herinaratra na ny fantsika.”
Miteny ho azy ireo ratra mahatsiravina nihatra tamin'ireo maty mangina tamin'ny ady tao Iraka ireo. Kanefa amin'ireo olona miisa maherin'ny 13 000 voatazona ao Iraka amin'izao fotoana izao, firy ny fijoroana vavolombelona toyè ny an'i Majed mety hipoitra? Ary inona no azo atao mba hisorohana ny karazana tantara toy izao tsy ho lasa hampiavaka an'i Iraka amin'ny hoavy ?
Momban'ny Mpanoratra : niarahana nanoratra tamin'i Gavin Simpson ity lahatsoratra ity